Taariikh Nololeedka Jilaaga Soo Jiishada Badan Fardeen Khan Min Bilaaw Ilaa Dhamaad – Filimside.net
Taariikh Nololeedka Jilaaga Soo Jiishada Badan Fardeen Khan Min Bilaaw Ilaa Dhamaad
March 8, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: March 8, 2018
Dhalasho Wacan Fardeen Khan atoore soo jiidasho leh, waxuuna u dabaal dagaya atoorahan sanad guuradiisa 44-aad.
Fardeen Khan waa atoore Hindi ah kana tirsan Bollywood-ka wuxuuna dhashay 8 Maarso sanadii 1974 wuxuuna ku dhashay magaalada Mumbia.
Xidigan ayaa Bollywood-ka kusoo biiray sanadii 1998 inkastoo uu filimo wacan sameeyay sheeko ahaan sidoo kalena dadaal badan sameeyay hadana marnaba uma suura galin inuu noqdo atoore awood badan oo Bollywood-ka miisaan ku dhex yeesho.
Fardeen Khan oo ku dhawaad 20-sano Bollywood-ka ka tirsan hadana xidigan wuxuu sameeyay 25-filim ee uu door dhameestiran ku leeyahay balse 8-sano ee ugu dambeesay jilaagan quruxda badan marnaba wax filim ah ma sameynin!
Fardeen Khan Iyo Bilawgii Noloshiisii Marxaladaha Ay Soo Martay:
Fardeen waxaa aabo u ah Super Star Feroz Khan oo sanadii 2009 geeriyooday halka hooyadiis lagu magacaabo Sundari sidoo kalena xidigan walaashiis la dhalatay waxaa lagu magacaabaa Laila Khan.
Fardeen Khan waxaa adeer u ah labada atoore ee 70-kii iyo 80-kii Bollywood-ka ka tirsanaan jireen Sanjay Khan iyo Akbar Khan.
Sidoo kale Fardeen waxay walaalo ama ilmo adeero yihiin Zayed Khan iyo Suzanne Khan oo uu aabo u yahay Sanjay Khan.
Fardeen Khan yaraantiisii wuxuu wax kusoo bartay Jamnabai Narsee School eek u yaalo xaafada Juhi magaalada Mumbai.
Dhanka waxbarashada heerka sare Fardeen wuxuu ka qalan jebiyay jaamacada University of Massachusetts Amherst eek u taalo dalka Mareekanka asigoo ka bartay maamulka iyo maareynta ganacsiga (Business Adminstration).
Laakiin markii uu Mumbai kusoo laabtay bartamihii 90-kii wuxuu dhanka filim jilista ka bartay machadka lagu magacaabo Kishore Namit Kapoor Acting Institute.
Fardeen Khan Iyo Sida Uu Bollywood-ka Kusoo Galay (1998 – 2002)
Xidigan oo aabihiis garab ka helaayo ayaa sanadii 1998 kusoo caan baxay filimkii Prem Aggan oo ay la jishay Meghna Kothari.
Feroz Khan wuxuu hamigiisa ahaa in wiilkiisa uu xidig ka dhigo sidaa darteed Prem Aggan isaga ayaa Director iyo qarash gareeye ka ahaa balse filimkan ganacsi ahaan wuu guul dareestay (Flop).
Fardeen Khan qaab jilinkiisa ayaa la amaanay wuxuuna ku qaatay filimkiisii kowaad abaal marinta atooraha ugu wanaagsan Bollywood-ka midka ku cusub ee shirkada Filmfare biixiso (Filmfare Award for Best Male Debut)
Fardeen dib u dhac ayuu sameeyay sidoo kalena mudo labo sano ah wax filim ma keenin wuxuuna sanadii 2000 la yimid filimkii Jungle oo ay la jileen Urmila iyo Suniel Shetty waxaana iska lahaa Ram Gopal Varma.
Filimkan guu wacan ayuu gaaray balse ma noqonin filim uu Fardeen Bollywood-ka kaga dhex muuqdo madaama doorkiisii uusan ahayn mid saameyn weyn lahaa.
Sanadii 2001 xidigan aad ayuu u mashquulay wuxuuna la yimid sedex filim oo kala duwan fariin ahaan iyo sheeko ahaan.
Filimkiisii kowaad wuxuu ahaa Pyaar Tune Kya Kiya ee uu Urmila la jilay inkastoo filimkan guul dareestay hadana filimkan waxaa marwalbo lagu xasuusan doonaa bandhigii taariikhiga ahaa oo ay Urmila ka muujisay.
Fardeen waxaa u xigeen oo uu la yimid sanadii 2001 filimadii kala ahaa Love Ke Liye Kuch Bhi Karega iyo Hum Ho Gaye Aapke laakiin labadan filim daadka ayaa qaaday waxayna xidigan ku badiyeen culeeska heestay.
Quruxlowga Bollywood-ka adkeysi badan ayuu sameeyay madaama uu sedex filim markale la yimid sanadii 2002 asigoo weli raadinaayo inuu noqdo atoore isku filan.
Laakiin filimkiisii kowaad Kitne Door Kitne Paas ee uu Amrita Arora la sameeyay heeso wacan ayuu lahaa balse ganacsi ahaan siweyn ayuu u guul dareestay.
Nasiib daro labadiisii filim ee uu dhamaadkii 2002 la yimid iyagana wax isbadal ah ma sameynin waxayna noqdeen kuwo guul dareesteen Kuch Tum Kaho Kuch Hum Kahein iyo Om Jai Jagadish.
Fardeen Khan Iyo Marka Uu Aqbalay Inuusan Filimada Atoore Kowaad Ka Noqon Karin (2003 – 2006)
Madaama qasaaradiisa badatay xidigan waxay filim sameeyayaasha u sheegeen inaysan hada kadib filim atoore kowaad kaga dhigi karin sidaa darteed wuxuu aqbalay inuu sameeyo filimada atoorayaal badan ay wehel kula yihiin.
Hadaba Fardeen nasiibkiisa ayaa isbadalay madaama uu filimkii cabsida badnaa Bhoot door ku yeeshay asigoo la sameeyay Ajay Devgn iyo Urmila wuxuuna noqday filimkan Hit-kiisii ugu horeeyay xidigan.
Fardeen Khan ayaa filimkii wacnaa sidoo kalena heesihiisii hirgaleen Khushi la sameeyay Kareena Kapoor sanadii 2003 balse xidigan filimkiisa wuu guul dareestay (Flop).
Feroz Khan ayaa wiilkiisa u sameeyay una maal galiyay filimkii Janasheen isagana filimkan ganacsi ahaan wuu guul dareestay waxaana ugu wacnaa inuu tiyaatarada la saartay filimkii Kal Hoo Na Hoo ee SRK hogaamiyaha ka ahaa.
Fardeen Khan sanadii 2004 wuxuu sameeyay labo filim Dev iyo Fida wuxuuna labadan filim la jilay Kareena Kapoor balse labadan filim waxba sooma kordhin madaama ay ganacsi ahaan guul dareesteen inakastoo filimka Dev sheekadiisa aad loo amaanay.
Fardeen sanadii 2005 wuxuu la yimid filimkii hirgalay No Entry oo uu Anil Kapoor iyo Salman Khan la jilay filimkan ayaa Super Hit weyn noqday sidoo kalena wuxuu noqday filimkii ugu weynaa sanadii 2005 dhamaad filimada ay Bollywood-ka sameeyeen xiligaas.
Laakiin labadii filim ee uu dhamaadkii 2005 la yimid Fardeen dhulka ayay galeen kuwaas oo kala ahaa Shaadi No. 1 iyo Ek Khiladi Ek Haseena.
Xidigan xaalkiisa sii xumaanayo ayaa wajiga badashay wuxuuna sanadii 2006 bilaabay sameynta filimada shactirada ah asigoo kasoo muuqday filimkii Pyare Mohan oo ay Vivek Oberao isla jileen laakiin filimkan waa lagu qasaaray.
Fardeen Khan Iyo Markii Uu Dadaalkiisii Ugu Dambeeyay Sameeyay (2007 – 2010):
Atoorahan nasiibkiisa marwalbo sii xumaanayay ayaa sanadii 2007 ku af bilaabay filimkii Just Married oo ay Esha Deol la sameesay laakiin filimkan si fudud ayuuba Flop ku noqday.
Fardeen farxad uma dhinayn sanadii 2007 madaama uu sameeyay filimkii shactirada badnaa Heyy Babyy ee Hit-ka weyn noqday wuxuuna la jilay Akshay Kumar, Riteish Deshmukh iyo Vidya Balan.
Laakiin 2007 xidigan wuxuu ku qatimay filim guul dareestay kaasi oo ahaa Darling asigoo la jilay Esha Deol iyo Isha Koppikar.
Fardeen ayaa dib usoo noolaaday wuxuuna sanadii 2009 la yimid 4-filim madaama xidigan uusan wax filim ah keenin sanadii 2008.
Fardeen filimadiisii Jai Veeru, Acid Factory iyo Life Partner kuligooda Flop ayay noqdeen sidoo kalena xidigan aad ayuu u niyad jabay.
Kaliya filimkii All The Best oo uu Ajay Devgn iyo Sanjay Dutt la jilay ayaa u guuleestay sanadii 2009 balse midaas ma bad baadin mustaqbalkiisa Bollywood-ka.
Ugu dambeyntii sanadii 2010 Fardeen Khan wuxuu la yimid filimkii Dulha Mil Gaya ee Sushmita Sen la sameeyay sidoo kalena SRK muuqaal marti ah ku lahaa.
Laakiin filimkan kuwii hore waxba ma dhaamin isagana Flop ayuu noqday midaasna waxay sababtay in Fardeen Khan aan dib dambe Bollywood-ka lagu sii arkin.
Mudo 8-sano ah xidigan wax filim ah ma keenin lamana ogo xiliga uu Bollywood-ka kusoo laaban doono iyo dadka diyaarka u ah inay fanka dib ugu soo celiyaan!
Fardeen Khan Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Xidigan waxaa la sheegay in 90-kii uu xiriir jeceyl la wadaagay atirishada Pooja Bhatt xili ay dalka Mareekanka wax ku wada baranayeen ayay halkaas isku fahmeen laakiin markii Hindiya lagu soo laabtay labo wado ayay kala qaadeen.
Fardeen Khan sanadii 2005 wuxuu la aqal galay gabadha lagu magacaabo Natasha Madhvani waxaana hooyo u ah atirishadii caanka ahayd Mumtaaz.
Fardeen iyo Natasha labo aroos ayaa loo dhigay waxayna isku guursadeen Diinta Islamka madaama Fardeen Muslim yahay sidoo kalena Diinta Hinduuga wey isku guursadeen madaama Natasha Hindu tahay.
Fardeen iyo Natasha waxay hooyo u yihiin gabar yar oo lagu magacaabo Diana Isabella Khan iyo wiil lagu magacaabo Azarius Khan waxayna ku wada nool yihiin qoyskan magaalada Mumbia.
Fardeen Khan hanti ahaan wuxuu heestaa lacag lagu sheegay $40 Million wuxuuna lacagtan iyo hantida ku helay dhaxal ahaan madaama aabihiis Feroz Khan uu kaga geeriyooday hantidan 9-sano ka hor.
Fadeexadii Hada Ka Hor Fardeen Khan Ku Dhacday Sanadii 2001:
May 6, 2001 waxaa xidigaan xireen ururka la dagaalamo daroogada iyo maan dooriyaha kadib markii Fardeen Khan lagu helay asigoo heesto daroogada nooca loo yaqaan (cocaine).
Sidoo kalena labada nin ee caan ku ah inay daroogada ka ganacsadaan Shaikh iyo Gomes ayaa Fardeen Khan lala xiray.
Fardeen Khan ayaa dambiga qirtay wuxuuna sheegay kaliya inuu hal gram oo Cocaine ah ka iibsan rabay ninka lagu magacaabo Shaikh.
Markii uu mudo 4-maalmood ah xirnaa Fardeen Khan damiin ayaa lagu soo daayay ugu dambeyntii maxkamada sare ayaa ku weesay wax dambi ah October 2002 sidaas ayaana lagu cafiyay.
Waad Ku Mahad santhay Aqriskaaga
Waxaa Aqrisay 1,693